Mepụta Dog Eserese Iji Kwesị Ntụkwasị Obi Nye Ezigbo Bowser
Okechukwu Ikwerre September 2, 2020 March 23, 2021
4 Crazy Dog Eserese? No, Fido On Mediums Anyị Hụrụ Taa
Gịnị mere anyị ji agwakọta anyị na iji ndị ọhụụ ase ọhụụ? Nke ahụ abụghị nke doro anya. Ikwesiri ịjụ anyị n'otu n'otu. Lee, m nwere ọrụ ole na ole dịka foto dijitalụ, ihe ọkpụkpụ, na mpempe dijitalụ nke ọrụ m.
Ihe ndị a bụ ezigbo anụ ụlọ nkịta. Ihe enyemaka sitere na ụwa Covid anyị 19.
Naanị m na-ere ihe osise m n'okpuru dị ka akwụkwọ mmado na mpempe akwụkwọ.
Foto nke Pom
Instagram bụ maka onye ọ bụla n'ime anyị hackers. Ihe ngosi ahụ dị ezigbo mma ọkachamara ọkachamara. Onye ọ bụla chọrọ ihe oyiyi anụ ụlọ gị. Mbido ma ọ bụ ọkachamara gị nkịta oyiyi ọchịchị.
Takashi Murakami na-eji okooko osisi 1970s nwere ihu ihu ọchị dị ka ebumnuche ya. Ekwu okwu banyere upbeat. Won ga-amata ọrụ omenkà si n'okporo ámá ya n'okporo ámá nke Pom nwa nkịta ya. Takashi si Ntuziaka Instagram nwere ihe a na-agba ụta (ọ bụghị n'ụzọ nkịtị obe ìgwè).
Takashi Murakami nwere ụzọ na-adọrọ mmasị nke ịhụ obi ụtọ. A mkpa nke onwe ma ọ bụ chọọ ịse ụwa ndị ọzọ nwere ike ịkọ na ịnụ ụtọ.
Jeff Koons ga-ekwe omume onye omenkà kachasị mara amara. Ọ bụrụ na ị nụbeghị banyere ya, ka m kọọrọ gị. Balloon Dog (Red) bụ ihe oyiyi ụkwụ 20. Koons na-akwụghachi ụgwọ maka azụmahịa gị. Ugbu a ụfọdụ na-akwa ọrụ ya emo maka nke ahụ. Jeff bụ ụlọ nkuzi nkuzi na-agbasawanye n'isiokwu ya. Echere na ndị na-ese ihe (ndị na-adabere na obere akpa gị), a na-egosipụta ọrụ ya n'ihu ọha na ụwa ọ bụla mara mma.
Balloon Dog Red nke Jeff Koons
Jeff's Balloon Dog (oroma) rere na ọdịda nke 2013 maka $ 58.4 nde. Tọ ndekọ n'oge ahụ maka onye na-ese ihe dị ndụ. Akụkọ banyere ụlọ ọrụ Koons, onye omenkà n'onwe ya, na ọrụ ya, bụ akụkọ mgbe ochie.
Takashi Murakami na Jeff Koons anaghị ere ere. Ejiri oke aha ha na ihe onyonyo abuo ahu.
Nkịta Eserese Dijitalụ
Consider na-atụle etu m si eji ihe eji eme ihe dijitalụ? Abụghị m onye purist. N'ezie nke ahụ abụghị n'ụzọ ọ bụla pụtara ịkwatu ụgbọ mmiri ahụ. N'ezie. Ifu m gwa m buru gi na aka. M hụrụ nkịta n'anya, m ga-etinyekwa ngwaọrụ m na fido.
Fido si na Latin “ịtụkwasị obi ma ọ bụ ikwupụta ntụkwasị obi”. O doro anya na ọ bụrụ na ị gaghị atụkwasị obi na nwa gị, onye ka ị ga-atụkwasị obi?
Egwu egwu 6 site n'aka David Bridburg
Ọ bụrụ na ị hụrụ nkịta n'anya, ihe mere i ji tinye na blog a, ị ga-ahụ ụlọ nyocha. Enyere m anya nke ukwuu. Nwere ike pịa na onyonyo ka mma.
Egwu egwu 34 site n'aka David Bridburg
Are bụ onye Rottweiler ma ọ bụ na ị bụghị. Ọ dịghị mkpa ka ị kwenye, ma ọ bụ enweghị ụzọ iji kwenye gị. Enwere m ebe dị nro n’obi m maka ire ure ndị a. Ọzọ anya na nke a na-eji nlezianya mee. Anumanu a di nkọ ma doo anya, nwee obi ike, onye na-egwu egwuregwu.
Ugbu a, nke a nwere ike ị dị ka ihe dị iche, m na-edebe ihe oyiyi anụmanụ m na nke m Binye mkpokọta oge. E mepụtara nchịkọta ahụ mgbe m nwesịrị Oge Nchịkọta, akọwapụtara ka isiokwu ahụ bụrụ ihe. Chee echiche banyere Jeff Koons 'Nkịta Balloon.
Nke a bụ otú m si ewebata nchịkọta:
Ihe egwu di egwu dika ndu bu ihe oma. Nwere ike ịhụ na mkpokọta oge m gara aga, m na-eweghachi isiokwu dị ka ihe. Na nchịkọta a, Post Contemporary Collection, M na-agwakọta ndụ n'ime ihe. A na-ajụkarị ụmụ anụmanụ ma mee ka ha bụrụ ezigbo mmadụ. ”
David Bridburg, onye edemede blog
Mmekọrịta nke oge a na fido dị ebe ahụ. Anụ mmiri nwere ike ịdị ogologo ndụ n’ụlọ gị karịa n’ọhịa. Anyị hụrụ ụmụaka n'anya n'anya.
Ihe mgbakwunye: Canine, Wolf, Fox na Rottweiler
Ekele dịrị mmadụ abụọ maara ihe osise m. Ha abụọ na-agụ isiokwu a ekwuola, gbakwunye ozi ka ị gụọ ma gbakwunye ihe oyiyi canine gị ọzọ. Mama m siri ọnwụ na m nwere ihe na-enye m na-agụ akwụkwọ. Otu onye nchịkọta dere m na-ekwu na ọ hụghị mbipụta wolf nke o nwere ka a na-atụle.
Enwere m ezigbo agbamume, alaghachiri m iji melite ọkwa a. Aga m ahapụ nkwubi okwu m dị na njedebe na-agbanweghi agbanwe.
Anụ ọhịa wolf bụ anụ ọhịa mbụ anyị
Maybe nwere ike inwe mmasị na nsụgharị abụọ a nke anụ ọhịa wolf. Usoro a bu uzo puru iche. Agaghị m enye obere nzuzo nzuzo m.
Ọnọdụ mbụ nke onyinyo a na-enwu gbaa ma na-enwu gbaa.
Egwu egwu 21 site n'aka David Bridburg
Ọ bụ anụ ọhịa mara mma nke na-ele anya. Ga - ahụ ụdị agwa ya, were obi ụtọ na-atụgharị uche n’ihe dị na gburugburu ya. Nkịta dị n'ime. Dika imi na nti.
Nzaghachi gị na-ekewa n'etiti onyonyo abụọ a. Inhapụ oghere ọcha na-adọrọ mmasị. Ọdịdị nke ihe oyiyi ahụ siri ike.
E nyere ikike nke abụọ n'ihi na ajị anụ mara mma bụ njirimara nke anụ ọhịa wolf.
Egwu egwu 36 site n'aka David Bridburg
The otu mgbanwe agbakwunyere agba na-emepụta wolf na ịchụ nta. Ọ na-ezube na ihe na na. Dị ka nkịta na-eso osa.
Otu onye Fox
Inweta nnwere onwe, agbakwunyere m ọtụtụ agba na nkịta ọhịa m. May nwere ike ịmasị ihe a. Nkịta ọhịa na-agbafe na ngere bụ ihe anyị na-anụ ụtọ ụmụ mmadụ. Gili nke nnwere onwe sitere n'okike.
Egwu egwu 37 site n'aka David Bridburg
Kedu ihe na-adọrọ mmasị banyere onyonyo a nke nkịta ọhịa? Will ga-ahụ ya, ọ bụrụ na m kwuo ya.
Nkịta ọhịa dị n’agbata obi gị anaghị ekwe gị rute nso. Ọ bụrụ na ị dị ka ọtụtụ n'ime anyị. Imechi a nwere ike n'ihi nke a. Ghọọ akụkụ nke okike.
Nkịta m enwetara m ezigbo nnabata sitere na ọtụtụ mmadụ. Dịka onye omenkà, enwere m ekele maka nnukwu ihe. A na-ekpughe anyị ndị na-ese ihe mgbe ụfọdụ.
Rottweiler bụ ụdị pụrụ iche pụrụ iche
Afọ iri abụọ gara aga, otu ezigbo enyi m nwoke gosiri m Rottweiler ya. Aha ya bụ Porkie. Nnukwu nwoke na-agba agba, Porkie bụ nkịta nnapụta. Enyi m bụ nkịta na-agba agba. Ọnọdụ nke Connecticut etinyewo ya na ya, na-azọpụta ndụ ya.
Porkie were iwe mgbe ọ nwetara ya. E metọrọ ya nke ukwuu. N’izu mbụ n’ụlọ ya, ọ gwara otu enyi ya, “Apụghị m ịme ya”. N'izu nke abụọ, ọ nwetụbeghị onye nkịta na-eguzosi ike n'ihe.
Ọ ga - asị, enweghị nkịta dị ka Rottweiler. Bredị ya nwere ọrụ ọ bụla. Ọ bụ nkịta kachasị na-arụ ọrụ.
Nke a bụ ụdị nke abụọ nke onyonyo Rottweiler.
Egwu egwu 33 site n'aka David Bridburg
Ndụ nwere oge dị mma na ihe ọjọọ. Onye ka m bu igwa gi ya? Are maara nke ọma. Porkie gafere, ezigbo enyi m wee nwee obi mgbawa afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị. Mgbe m na-eru uju n’oge ahụ, m na-eji obi ụtọ echeta ihe ndị merenụ.
N'oge ndụ ya, Porkie bụ otu n'ime ndị egwuregwu kachasị egwu m nwetụrụla. Ha abụọ nwere nnukwu obi.
Okwu ikpeazụ a bụ njedebe m nye onwe m. Dika m kwuru na elu na mmelite a, agaghị m agbanwe nkwubi okwu mbụ. Ewezuga ịgbanwe okwu ndu site na "nkịta" gaa na "canines".
Canines dị ka isiokwu nke ọrụ nkà dịruola mgbe ebighị ebi. Ogologo oge anyị nọrọ gburugburu. Usoro ohuru ohuru.
Pịa na onyonyo ọ bụla ịchọrọ iji hụ ihu ahịa ihe onyonyo na weebụsaịtị m (naanị nka m, anaghị emetụta iji kpuchie onyonyo ahụ n'elu).
Ajụjụ: Kedu ka ndị omenkà nke oge a si hụ nkịta n'anya? Ka m gụọ ụzọ. Kpọrọ ihe, ndị ọhụụ ọhụụ na-atọ ụtọ.
Ezi Art nke America Lovehụnanya: Atọ Echiche Atọ